AMISOM oo aqbashay inay ciidamadeeda ka saarto garoonka Muqdisho Stadium – STAR FM SOMALIA
AMISOM oo aqbashay inay ciidamadeeda ka saarto garoonka Muqdisho Stadium
Afhayeenka ciidanka AMISOM ee jooga Soomaaliya Joe Kibet ayaa sheegay in ciidamada AMISOM dhawaan ay ka baxayaan garoonka ciyaaraha ee Muqdisho Stadium.
Joe Kibet oo la hadlay wakaalada wararka Soomaaliyeed ee SONNA ayaa sheegay;“Waxaan kuu sheegayaa dhawaan in ciidamada AMSIOM ay ka baxayaan Stadium Muqdisho, laakiin ma ku dhihi karo waqtigaas saxda ah ayay ka guurayaan.” Sidaasi waxaa yiri Afhayeenka AMISOM.
Joe Kibet ayaa sheegay in ogaantiisa uu ka warhaayo guutada ciidamada ah ee hada dagan halkaas loo diyaarinayo inay ka baxaan oo meel kale la geeyo.
Masuuliyiin ka tirsan dowlada federaalka Soomaaliya oo uu ka mid ahaa wasiirka Dhalinyarada iyo cayaaraha ayaa dhawaan tagay garoonkaas waxaana ay sheegeen in Stadium Muqdisho uu muhiim u yahay cayaartoyda Soomaaliya dowladduna ay ku dadaalayso in dib u dhis lagu sameeyo.
Garoonka ayaa ah mid balaaran wuxuuna ka koobanyahay qaybo, sida qaybta Kubada Cagta, Kolayga, Dabaasha iyo qaybo kale oo muhiim ah, waxaana arintaan ay ku soo aadaysaa iyadoo haatan tartamada Kubada Cagta lagu qabto garoonka Banaadir oo kaliya.
Garoonka weyn ee Stadium Muqdisho ayaa waxa hore ugu dhisay dowladii hore ee Maxamed Siyaad barre dowlada Shiinaha.
DHAGEYSO:-Warka Duhur Starfm 11-6-2016